विकिनी किलर सोभराज प्रेमीकाको यादमा | Jwala Sandesh
विकिनी किलर सोभराज प्रेमीकाको यादमा
| प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर १, २०७३ ::: 422 पटक पढिएको |
काठमाडौं, मंसिर १ । उमेरले ७२ पुगे। छुट्ने आशमा १३ वर्ष बित्यो। श्रीमतीको यादले सताउँछ। कारागारमा जवान श्रीमतीको फोटो देखाएर अरु कैदीलाई सुनाउँछन्,’ सि इज माई वाइफ।’ उनले ६४ वर्षको उमेरमा २० वर्षकी युवतीसँग विहे गरेका थिए।
त्यतिबेलाजस्तो जाँगर अहिले कहाँ बाँकी छ र? जेलर बेदप्रसाद खरेल उनको भनाइ उद्दत गर्दै भन्छन्, ‘आइ विकम ओल्ड, सुड वी रिलिज याज अ सिनियर सिटिजन? (म बुढो भए। जेष्ठ नागरिकका रुपमा रिहा गर्नुपर्ने होइन?)’ काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रिय कागारारमा पट्यारलाग्दा दिनहरु बिताउँनु पर्दाको पीडा उनैलाई थाहा होला। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ‘विकिनी किलर’ भनेर चिन्छन्। ‘इस्पिटिङ किलर’ र ‘द सेरपेन्ट’ अन्य उपनाम हुन्। सबैले चिन्ने नाम ‘चार्ल्स सोभराज’। उनको पूरा नाम ‘हटचन्द भाओनानी गुरुमुख चाल्र्स सोभराज’। उनी महिलाको मन जित्थे। नजिक हुन्थे। सेक्स गर्थ्ये (कसैसँग बिहे समेत)। हत्या गरेर फरार हुन्थे।
रियालिटी शो ‘बिग बोसका ५’ का दौरान सेलिब्रेटी समाचार प्रस्तोता मन्दिप बल्भीले प्रश्‍न राखिन्।’ के तपाईले सोभराजसँग सेक्स गर्नुभएको छ?’ पछिल्ला केही वर्ष सञ्चारमाध्यममा चर्चा छैन। १९७० देखिका यी सिरियल किलरको जाँगर विगत २ वर्षदेखि मर्दै गएको छ। त्यसैले, जेलरलाई बारम्बार सोध्छन्- ‘मेरो रिहाई कहिले हुन्छ।’ ‘उमेरले गर्दा होला। जाँगर मरेको छ।’ जेलर खरेलले भने- ‘कोठा एकदम फोहर छ। भताभुंग र लथालिङग छ।’ उनलाई भेट्न निकै कम मान्छे मात्रै कारागार आउँछन्।
केही वर्षअघिसम्म सोभराजले पूराका पूरा दिन पढेरै बिताउँथे। आजकल टेलिभिजन हेरेर समय बिताउने गरेको जेलर खरेल बताउँछन्। ‘पढ्नमा उनलाई त्यति साह्रो मन छैन। टिभी हेर्छन्। बाँकी समय अन्य कैदीसँग गफ गरेर बताउँछन्,’ खरेलले भने। विहेताका हरेक हप्ता पुग्ने श्रीमती निहिता विश्वास भेट्न नआएको १ वर्ष भयो।
सासू-आमा सकुन्तला थापा बेला-बेलामा भेट्न आउँछिन्। तर ज्वाँईसँग पारिवारीक कुरा हुदैँन। सोभराजको मुद्दा हेर्ने वकिल भएकाले सकुन्तला पेशागत धर्म निभाउन केन्द्रिय कारागारस्थित गोलघर धाँउछिन्। २००८ मा गरेका थिए निहितासँग बिहे सोभराजको पछिल्लो बिहे सन् २००८ मा भयो। जेलमै बडा दशैंको अवसरमा उनले निहिता विश्‍वाससँग बिहे गरे। टिकाको दिन आमा सकुन्तला थापासँगै सोभराजलाई भेट्न निहिता पुगेकी थिइन्। जेलरको आँखा छलेर सोभराजले उनलाई सिन्दुर लगाइदिए।
त्यसयता, सोभराज पत्नी निहिता रातारात सेलिब्रेटी बनिन्। उनलाई २०११ मा भारतको चर्चित रियालिटी शो ‘बिग वोस ५’ मा समावेश हुने अवसर सोभराज पत्नी भएकै कारण मिल्यो। विश्‍वका ठूला मिडियामा चर्चा भयो। ‘बिग बोसका ५’ का दौरान सेलिब्रेटी समाचार प्रस्तोता मन्दिप बल्भीले प्रश्‍न राखिन्।’ के तपाईले सोभराजसँग सेक्स गर्नु भएको छ?’ यस प्रश्‍नमा निहिता नाजवाफ भइन्। तर उनकी आमाले बल्भीले निहिताको अपमान गरेको बताइन्। आमाको प्रतिप्रश्‍न थियो, ‘सोभराज जेलमा छन्। निहिता बाहिर।
कसरी सेक्स संभव छ?’ बिहे, सेक्स र हत्या सोभराजको जन्म नै सामाजिक कानुन तोडेर राखिएको गोप्य सेक्सको उपज थियो। उनी कुमारी आमाको कोखबाट जन्मिए। सोभराजकी आमा भियतनामी हुन्। बाबु हटचन्द सिन्ध जातीका भारतीय हुन्। फ्रेन्च इन्डो-चाइना क्षेत्र साइगोन (अहिलेको हो चि मिन्हा) सिटीमा सन् १९४४ मा सोभराज जन्मिए। बच्चा जन्मिएको छोटो समयमै बाबु-आमाको सेक्स-अफेयर टुंगियो। आमा भाओनानीले इन्डो-चाईना क्षेत्रमै कार्यरत फ्रेन्च आर्मीका लेफ्टिनेन्टसँग नयाँ जीवन सुरु गरिन्। सुरुमा ती लेफ्टिनेन्टले श्रीमतीसँगै सोभराजलाई पनि स्विकारे। सोभराज फ्रान्स पुगे। बाबु-आमा अलग-अलग भएकाले सोभराज कहिले बाबु भेट्न भियतनाम त कहिले आमा भेट्न फ्रान्स पुग्थे। फ्रान्समा आमा भाओनानीका अन्य सन्तान जन्मिए। त्यसपछि उनले सोभराजलाई हेला गर्न थालिन्। सोभराजमा महिला विरोधी भावना पलायो। टिनएजमै उनले सानातिना अपराध गर्न थाले। १९६३ मा पहिलोपटक चोरीको आरोपमा जेल पर्दा उनको उमेर १९ वर्षको थियो। उनले जेलमा फिलिक्स डी इस्कोज्नीलाई भेटे। धनाढ्य इस्कोज्नीले नै जेलमुक्त भएपछि सोभराजलाई पेरिसको आपराधिक गिरोहसँगको सम्पर्कमा ल्याए। अब सोभराजको अपराध शृंखला बढ्दै गयो। सोभराजले च्यानतल कोम्पाग्नन नामकी पर्सियन युवतीसँग भेटे। मायामा परे। बिहेका लागि च्यानतललाई प्रस्ताव राखेकै दिन उनी कार चोरीको आरोपमा पक्राउ परे। ८ महिना जेल परे।
च्यानतलले जेल पर्दाको समय सहयोग गरिन्। उनीहरुले बिहे गरे। तर सोभराज सुध्रिएनन्। पूर्वी युरोपमा नक्कली कागजात लिएर घुम्ने तथा पर्यटकलाई लुट्ने गरेका कारण सोभराज प्रहरीको खोजी सूचिमा थिए। त्यसैले उनी १९७० मा गर्भवती श्रीमती लिएर सोभराज एशिया आए। मुम्बईमा च्यानतलले उषा नामकी छोरीलाई जन्म दिइन्। पारिवारीक जिम्मेवारीसँगै सोभराजको अपराध कर्म थपियो। उनले अब चोरी, डकौतीसँगै हत्या समेत गर्न थाले। सन् १९७३ मा होटल अशोकास्थित गहना गृहमा सोभराजले डकौती गरे। जेल परे। श्रीमतीले बिरामी भएको बहाना बनाएपछि उनी जेलमुक्त भए। तर छोटो समयमै यो दम्पती फेरि पक्राउ पर्‍यो। यसपटक सोभराज आफ्ना बाबुले जमानत तिरिदिएपछि जेलमुक्त भए अनि अफगानिस्तानको काबुल पुगे। काबुलमा यो दम्पतीले पर्यटकलाई लुट्न थाल्यो।
उनीहरु बारम्बार पक्राउ पर्थे। भारतमा जसरी छुट्ने गरेका थिए। त्यसरी नै बिरामीको बहाना बनाएर छुट्थे। सोभराजले अपराध छाडेनन्। प्रहरीले उनको पिछा छाडेन। उनी श्रीमती र परिवार छाडेर काबुलबाट इरान भागे। आजित भइसकेकी च्यानथलले आपराधिक विगत बिर्सेर फ्रान्स फर्कने निर्णय लिइन्। उनले कहिल्यै सोभराजलाई नभेट्ने भइन्। सोभराजले यसपछिका २ वर्ष प्रहरी फन्दाबाट बच्न अनेक तिकडम लगाए। उनले १० वटा पासपोर्ट बोक्थे। चोरीका ती पासपोर्ट बोकेर अलग-अलग नाममा उनी नेपाल, मलेसिया, भारत, थाइल्यान्ड, मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपका धेरै देश घुमे। टर्कीको इस्तानबुलमा आफ्ना सौतेनी भाई आन्द्रेसँग मिलेर आपराधिक धन्दा चलाए। ग्रिस र टर्कीमा धेरै अपराध गरे। ग्रिसको एथेन्समा यी दुई दाजुभाई पक्राउ परे। पक्राउ पर्दा सोभराजसँग नक्कली पासपोर्ट थियो। आफ्नो वास्तविक पहिचान खुल्न अगावै सोभराज भागे। भाई आन्द्रेलाई ग्रिक प्रहरीले टर्कीको जिम्मा लगायो। आन्द्रे १८ वर्ष जेल परे।
परिचय लुकाउँदै सोभराज भागिरहे। उनले यसरी भाग्ने क्रममा फरक-फरक नाममा थुप्रै पर्यटकको हत्या गरेको अध्ययनबाट खुलेको छ। उनी कहिले सेल्सम्यान त कहिले ड्रग्स करोबारीका रुपमा पर्यटकसँग नजिक हुन्थे। भाग्दै जाँदा थाइल्यान्डमा उनले मारि एन्ड्री लिक्लेर्कलाई भेटे। क्यानेडेली पर्यटक एन्ड्री सोभराजको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भइन्। मायामा फसिन्। सोभराजका अपराध कर्ममा अन्धो भएर साथ दिइन्। यसरी उनले आफ्नो व्यक्तित्वबाट थुप्रैलाई प्रभावमा पारे। यसरी रहन गयो ‘विकिनी किलर’ नाम भारतीय युवा अजय चौधरी प्रभावित हुनेमध्ये एक थिए। चौधरीले सोभराजको ग्याङमा सेकेन्ड म्यानका रुपमा काम गर्न थाले। १९७५ को हत्या सार्वजनिक रुपमा बाहिर आएको सोभराजको पहिलो हत्या प्रकरण हो।
उनले हत्या गरेकी पहिलो महिलाको नाम ‘जेन्नी बोल्लीभर’ रहेको सेर्पेन्टाइन नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। हत्या गरेर सोभराजले यी महिलाको लाश थाइल्यान्डको समुन्द्रमा फालेका थिए। तर एक बिहान डुङगा चलाइरहेका एक माझीले पानीमा तैरिरहेको अवस्थामा महिलाको शरिर भेटे। उनले प्रहरीलाई खबर गरे। लाशको कुनै पहिचान नभेटिएपछि प्रहरीले पौडीका क्रममा उनको निधन भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट निकाल्यो। यी महिलाले फूलजस्तो विकिनी लगाएकी थिइन्। सोभराजका विषयमा अध्ययन गर्ने विश्वका प्रहरी अधिकारीहरु उनले हत्या गर्ने अधिकांश महिला उनीसँगको अपराध कर्ममा कुनै न कुनै रुपमा जोडिने गरेको बताउँछन्।
आफ्नो वास्तविक पहिचान खुल्ने डरले सोभराजले महिलाको हत्या गर्ने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन्। सोभराजले जेन्नीको हत्या गरेको केही समयपछि नै भिटाली हाकिम नामका एक युवाको हत्या गरे। उनको शरिरका अवशेष पटाया रिसोर्ट नजिक जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो। शवका अवशेष भेटिनुअघि नै सोभराजले हाकिमलाई खोज्दै आएकी उनकी प्रेमिका चार्मेनी कारोउको हत्या गरिसकेका थिए। अवशेषको पहिचान गर्न प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा स्विम सुटमा पौडी खेल्दै गर्दाको अवस्थामा कारोउको शव भेटियो। यसअघि उस्तै प्रकृतिमा जेन्नीको शव भेटिएको थियो। दुई महिलाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेपनि उस्तै प्रकृतिको हत्या भएका कारण हत्यारा सोभराज ‘विकिनी किलर’ उपनामले कुख्यात बने। १६ डिसेम्बरमा हाकिम र उनकी प्रेमिका कारोउको अन्त्येष्टी गरियो।
१८ डिसेम्बरमा नक्कली पासपोर्ट बोकेर अर्कै नाममा सोभराज काठमाडौं आए। उनीसँगै एन्ड्री लिक्लेर्क पनि काठमाडौं आइन्। १९७५ मा थाइल्यान्डको समुन्द्री किनारमा विकिनी लगाएको अवस्थामा मृत भेटिएकी जेन्‍नीको हत्यामा सोभराज संलग्‍न भएको प्रमाण भेटियो। बाहिर सार्वजनिक भएको यो उनको पहिलो हत्या प्रकरण थियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा सोभराज यस्ता थुप्रै हत्यामा संलग्‍न भेटिए। सोभराज काठमाडौैंमा पनि अपराध कर्ममै जोडिए। लिक्लेर्कले उनको साथ दिइन्। उनले १९७५ मा काठमाडौंमा एक अमेरिकी नागरिकको हत्या गरे। त्यसपछि पनि उनले विभिन्‍न समयमा नेपालमा विभिन्‍न पर्यटकको हत्या गरेका छन्।
१९८४ मा क्यान्सरका कारण लिक्लेर्कको निधन भएपछि सोभराजले अन्य सहयोगी महिलामार्फत अपराध कर्मलाई जारी राखे। विभिन्न देशका गुप्तचर प्रहरीहरुले अनुसन्धानपछि निकालेको निष्कर्षले भन्छ-‘सोभराज महिलासँग भावनात्मक सम्बन्ध बनाउथेँ। शारीरिक निकटता बढाउँथे। आफ्नो अपराधकर्ममा साथ खोज्थे। साथ नदिने महिलाको हत्या गर्थे।’ जस-जसले उनको अपराध कर्ममा साथ दिए ती महिलाले पनि आफ्नो पोल खोल्न सक्ने भय सोभराजलाई थियो। त्यसैले उनले धेरैको हत्या गरे।
नेपालमा पक्राउ नेपाल प्रहरीले उनलाई सन् २००४ मा दरबारमार्गबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी रोयल क्यासिनोबाट फर्कदै गर्दा पक्राउ परे। त्यसपछि सोभराजमाथि आपराधिक मुद्दा चलाइयो। पक्राउ परेपछि सोभराजका कर्तुत बाहिर आउन थाले। सन् १९७५ मा नेपालमा भएको अमेरिकी पर्यटक कोनी जोई ब्रोनिजको हत्यामा सोभराज दोषी भेटिए। जिल्ला अदालत भक्तपुरले उनीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनायो। सोभराजमाथि भारत,थाइल्यान्ड, टर्की,युगोस्लाभिया लगायत थुप्रै देशमा व्यक्ति हत्या गरेको आरोप छ। काठमाडौंमा पक्राउ पर्नुअघि नेपाल प्रहरीसँगै विश्वका थुप्रै प्रहरी तथा इन्टरपोलले समेत उनलाई खोजीको सूचिमा राखेको थियो।
उनले १९७३ देखि १९७६ सम्ममात्रै विभिन्न स्थानमा फरक-फरक पासपोर्ट बोकेर हिड्ने क्रममा कम्तिमा २४ जनाको हत्या गरेको प्रहरी रेकर्ड छ। सम्झिरहन्छन् निहिता विश्वासलाई नेपालको जेलमा सजाय काट्ने क्रममा २००८ मा उनको आफू भन्दा निकै कम उमेरकी निहिता विश्वाससँग भेट भयो। निहिताकी आमा सकुन्तला थापा सोभराजकी निजी वकिल हुन्। उनीसँगै निहिता गोलघर आउँथिन्। बिस्तारै सोभराजको प्रेममा फसिन्। निहिताको परिवारले उनीहरुबीचको सम्बन्ध र विवाहलाई मान्यता दियो। निहिताले सोभराजकी श्रीमती भएपछि सेलिब्रेटी महिलाको परिचय बनाइन्। श्रीमान्-श्रीमती भएपनि बुढा सोभराज र जवान निहिताबीच भावनात्मक सम्बन्ध छैन। निहिता आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई आवेशको निर्णय भन्न रुचाउँछिन्। थाहाखबरको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘ त्यतिखेर आवेशमा गरे। जे गरेँ, ठिकै गरेँ।’ सञ्चारमाध्यमप्रतिको गुनासो पोख्दै भनिन्, ‘त्यतिबेला मेरो कुरा सुनुवाई गर्नु भएन। अब मैले बोलेर काम छैन।’ स्रोत भन्छ, आमा सकुन्तलाले निहितालाई अर्कै ब्वाईफ्रेन्ड खोज्न दबाब दिइरहेकी छिन्। निहिताले यस विषयमा केही खुलाउन चाहिनन्। तपाई सोभराजसँग टाढा हुनुभयो। भेट्न जानुहुन्न रे किन? थाहाखबरको जिज्ञासामा नितिहाले प्रतिप्रश्‍न गरिन्, ‘मेरो आफ्नो जिन्दगी छ। फुर्सद हुनपर्‍यो नि! भेट्नका लागि। रोमियो जुलियट जस्तो लभ होइन। सधै माया मात्रै गरेर बस्‍न?’ साभार थाहा खवरबाट